I-Casa Aloha e-Villa Aloha. - I-Airbnb
I-Casa Aloha e-Villa Aloha.
Chacala, Nay., i-Mexico
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Diego Gonzalo
Le ndlu yakhiwe ngothando olukhulu nomdlandla, njengesiqalo sephrojekthi ndawonye. Ingadi yaklanywa ngokuphelele umyeni wami, owafaka intshiseko enkulu yokushiya imininingwane yokuhlobisa ngendlela esiyithandayo, ecabanga ngokunethezeka kwesivakashi.
Ungakwazi ukuphumula lapho ubona imvelo ezungeza lesi sikhala, futhi ujabulele indawo yokubhukuda lapho ulalela umsindo wezinyoni namagagasi olwandle kusukela idolobhana lithule kakhulu futhi indlu iyimizuzu emibili kuphela ukusuka ogwini.
Indlu yethu iyindawo entsha ngokuphelele ethule, enengadi enhle, nedamu eliqabulayo, elikhanyiswa ebusuku ngezibani zelanga ezinikeza indawo enhle. Umuzi imizuzu emibili nje ebhishi, futhi enye imizuzu embalwa kusuka super ethule izikebhe ubhiya bar, ethekwini Chacala kuyinto lolwandle enhle kanye abantu bomuzi bayabahlonipha kakhulu, kusukela sonke sazana, Ngakho-ke akuyona indawo ethule kakhulu futhi ephephile lapho ungeza khona ukuze uphumule futhi ukhohlwe ngokucindezeleka komuzi kanye nomsebenzi wokuphila kwansuku zonke.
Ichibi kanye nengadi kwabelwa ezinye izivakashi.
4.61 out of 5 stars from 105 reviews
4.61 · 105 okushiwo abanye
Ngiyayithanda indawo yendlu njengoba izungezwe uhlaza nezihlahla eziluhlaza, isendaweni emaphakathi ekuvumela ukuthi uhambe emizuzwini embalwa uye ezindaweni ezibalulekile zeChacala.
Ibungazwe ngu-Diego Gonzalo
Siyatholakala nganoma imiphi imibuzo noma ulwazi oludingayo mayelana nedolobha noma indlu. Kuhle ukusho ukuthi le ndlu ise-villa lapho kunamanye amakamelo aqashiwe, nokho indlu iyimfihlo, okwabelwana ngayo ingadi kanye nedamu, okuyizindawo ezivamile.
Siyatholakala nganoma imiphi imibuzo noma ulwazi oludingayo mayelana nedolobha noma indlu. Kuhle ukusho ukuthi le ndlu ise-villa lapho kunamanye amakamelo aqashiwe, nokho indlu iyi…